विजुक्छेले अझै नेमकिपाको नेतृत्व नछोड्ने « Dhankuta Khabar
विजुक्छेले अझै नेमकिपाको नेतृत्व नछोड्ने
२६ भदौ ,काठमाडौं ।
राजनीति कति उमेरसम्म गर्ने ? कति वर्षसम्म पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने ? नेपालको राजनीतिको यक्ष प्रश्न हो यो । बाचुन्जेल नेतृत्वमा रहन रुचाउने नेतृत्वको नेपालमा की छैन ।
सत्तारुढ नेकपा देखि साना राजनीतिक दल सम्ममा सकभर नेतृत्व छोड्न नचाहने नेताहरु छन् ।
भक्तपुरलाई किल्ला बनाउदै राजनीति गर्दै आएका नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे रोहित गत प्रतिनिधीसभा चुनावमा आफुले लड्दै र ०४८ सालदेखि जित्दै आएको क्षेत्रमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार भए । उनले पार्टी सचिव प्रेम सुवाललाई उक्त क्षेत्रमा टिकट दिए, आफु अभिभावकको रुपमा मात्र रह्ने घोषणा गरे ।
त्यसबेला रोहितको पार्टीभित्र मात्र होइन, बाहिर पनि राम्रै प्रसंसा भएको थियो ।
८२ वर्षिय रोहितले पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर उत्तराधिकारी निर्माणमा भूमिका खेलेको भन्दै प्रसंसा कमाएका पनि थिए ।
तर तिनै रोहित अहिले फेरि पार्टी नेतृत्व भने अझै आफ्नै कब्जामा राख्न चाहेका कारण आलोचित बन्न थालेका छन् ।
नेमकिपाको असोज ३ देखि ५ सम्म भक्तपुरमै सातौ राष्टिय महाधिवेशन हुदैछ । पहिलो महाधिवशेनदेखि अहिलेसम्म नेतृत्वमा उनै रोहित छन् । यो पटक संसदमा जस्तै पार्टीमा पनि उनले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन् की भन्ने नेमकिपाका नेता कार्यकर्तालाई लागेको थियो । तर उनले त्यसको संकेत नगरेपछि पार्टीभित्र असन्त्ुष्टि चुलिएको नेमकिपाका एक केन्द्रीय नेताले बताए ।
बिजुक्छे निरन्तर पार्टी नेतृत्व सम्हाल्ने नेता हुन् । ८२ वर्ष पार गरिसकेका बिजुक्छे नेमकिपाको सुरुदेखि एकछत्र नेतृत्वमा छन् । ०३१ सालमा नेपाल मजदुर किसान संगठनको नेतृत्वमा रहेका बिजुक्छे ०४६ पछि पार्टी आकारमा आएको नेमकिपा नेतृत्वमा छन् ।
यो महाधिवशेनबाट उनले पार्टी नेतृत्व पनि दोश्रो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने आश पार्टी नेता कार्यकर्ताले गरेका थिए । तर उनले त्यो संकेत देखाएका छैनन् ।
पार्टीमा रोहितले दाबी गरुन्जेल उनलाई चुनौति दिने गरी नेतृत्वमा कसैले पनि दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन । भक्तपुरका मसिहा नै मानिने रोहितकै कारण पार्टी भक्तपुरमा मजबुत बनिरहेको भन्दै उनलाई कसैले पनि त्यहाँ टक्कर दिने हैसियतमा छैनन् । उनको स्वेच्छाले कहिले नेतृत्व छोड्न चाहान्छन, त्यही वेला मात्र अर्काे नेता नेतृत्वका लागि अगाडी बढ्ने अवस्था छ ।
मुखले नबोलेपनि भित्री चाहनामा रोहितले यो पटक पार्टी नेतृत्व छोड्छन की भन्ने नेताहरुलाई लागेको थियो । तर उनले पार्टीमा नेतृत्व गर्ने उत्तराधिकारीको जन्म भईनसकेको तर्क अहिले अगाडी सारेका छन् । पार्टीमा अझै ५ वर्ष आफ्नै नेतृत्व आवश्यक रहेको तर्क रोहितले गरेको नेताहरु बताउँछन् । ४५ वर्षसम्म पनि नेतृत्व हस्तान्तरणमा रुची नदेखाएपछि नेमकिपामा अहिले भित्रभित्रै भुसको आगो झै विवाद भने निम्तन थालेका छ ।